खेमनारायण न्यायपरिषदको सदश्य हुन योग्य हुन??-NepalKanoon.com
खेमनारायण न्यायपरिषदको सदश्य हुन योग्य हुन??
१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसबारे छलफल गर्न पार्टीनिकट कानुन व्यवसायीलाई डाकेको एमाले स्थायी समिति बैठकमा न्याय परिषद सदस्य खेमनारायण ढुंगाना पुगेपछि हल्लाखल्ला भएको छ । सरकारी गाडीमै बुधबार बिहान ९ बजे एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खु पुगेका उनलाई नेता र कानुन व्यवसायीले बैठकमा बस्न नदिई फर्काइदिएका छन् ।
एमाले स्थायी समितिले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिबारे छलफल गर्न पार्टी निकट कानुन व्यवसायीलाई डाकेको थियो । एक सहभागीका अनुसार ढुंगाना बा १ झ ९६०१ नम्बरको स्कारपिओ गाडीमा बल्खु पुगेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । उनी बैठकस्थल पुग्दा नेता युवराज ज्ञवाली, अमृतकुमार बोहरा, भरतमोहन अधिकारी र केही वकिलमात्र पुगेका थिए ।
बैठक स्थलमा ढुंगाना पुगेपछि सबै अवाक् भए । करिब पाँच मिनेट बसेपछि अधिवक्ता हरि फुयालले भेनका थिए, ‘उहाँ (खेमनारायण) पनि आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए म आउँदैनथेें । दाइको उपस्थितिले अप्ठेरो भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अंगका सदस्य उहाँ आउनुहुँदैनथ्यो । बैठकमा उहाँ पनि बस्ने हो भने मचाहिँ बस्दिनँ, जान्छु ।’ फुयालले कुरा उठाएपछि बरिष्ठ अधिबक्ता संग्रौलाले पनि ‘तपाइँ नआउनुभएको भए राम्राृ हुनेथियो ।’
यता ढुंगानाले भने पार्टीको आधिकारिक ठाउँबाटै बोलाइएको जवाफ दिएका थिए । अन्य अधिवक्ताले भनेको नमानेका ढुंगानालाई एमाले पाका नेता अधिकारीले सम्झाएका थिए । पार्टीको बैठकमा सरकारी गाडीमा आएको मिडियाले थाहा पाए भने तपाइँको हालत के हुन्छ भनेपछि उनी करिब १० मिनेट बसेर फर्केका थिए ।